जहाँ यस्तो भयो …. यसरी भएको थियो भिक्षुलाई विभेद « जागरण मिडिया सेन्टर
Home » दलित समाचार » जहाँ यस्तो भयो …. यसरी भएको थियो भिक्षुलाई विभेद
जहाँ यस्तो भयो …. यसरी भएको थियो भिक्षुलाई विभेद
रूपन्देही, जागरण मिडिया सेन्टर, ।
भगवान गौतमबुद्धले कहिल्यै पनि जातलाई प्राथमिकता दिनुभएन । त्यसैले त बुद्ध धर्मका अनुयायीहरुले थर लेख्दैनन् । विश्वभर कै बुद्धका अनुयायीहरुले पदावधि र नाम मात्रै लेख्छन् बोल्छन् । तर, बुद्ध धर्म र दर्शन विपरित बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भने एक जना भन्ते(पुजारी)ले जातीय अपमान भोग्नुपरेको छ ।
करिव साँढे २ वर्षअघि राजकिय बौद्ध विहारमा मुख्य भन्तेको रुपमा आएका भिक्षु मिलिन्द हिन्दु धर्ममा जस्तै तल्लो जात भन्दै अपमान सहन बाध्य भएका हुन् । ‘म आज भन्दा ३० वर्षअघि मेरा गुरु भिक्षु अश्वोघोषकै प्रेरेणाबाट भिक्षु भएको थिएँ, तर आज तल्लो जात भन्दै बुद्धकै जन्मस्थलमा अपमानित भएको छु’ भिक्षु मालिन्दले गुनासो गर्नुभयो ।
साँढे २ वर्ष अगाडि भिक्षु मालिन्द लुम्बिनी स्थित लुम्बिनी धर्मोदयमा आउँदा सवैले जयजयकार गर्थे । पुजाआजा पनि राम्रैसँग चलेको थियो । तर, धर्मोदयका म्यानेजर बाबु साहेब भन्ने लखनसिंहले भिक्षु मालिन्द ‘भिम बहादुर सार्की’ भन्ने थाहा पाए, त्यसपछि भने मालिन्दले विस्तारै विभेदको पिडा सहनुप¥यो ।
म्यानेजर सिंहले करिव ६ महिना अगाडि भिक्षु मिलिन्दलाई जातीय सूचक ‘चमारलाई हामीले पुज्नुप¥यो, तँ निस्किहाल’ भन्दै गाली गलौज सहित आक्रमण नै गरेका थिए । प्रत्यक्षदर्शी धर्मोदयका एक जना पूराना कर्मचारी झलक बहादुर ओलीले भन्नुभयो –‘चमार तँ यहाँबाट निस्कि’ भनेर भनेको मैलै पनि सुनेको हुँ ।’ झलकलाई चमार भनेको के हो थाहा नभएको बताउनुभयो । तर पटक–पटक भिक्षु र म्यानेजर लखनसिंह विच भने भना भन हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
६ महिना अघि तल्लो जात भन्दै आक्रमणको प्रयास भएपछि धर्मोदय उपसमितिले घटनालाई बाहिर ल्याउन रोकेको थियो । त्यतिखेर समितिले लखन सिंहलाई कारवाही गर्ने र अबदेखि जातीय सूचक लगाएर गाली गलौज नगर्ने सहमती गरिएको थियो । तर, बाबु साहेब लखन सिंहलाई कुनै कारवाही भएन ।
त्यतिखेर आफुले गुरु र बुद्धको अनुयायी भएकाले विवाद नगरेको भिक्षु मिलिन्दको भनाई छ । तर,आफुलाई त्यहिका स्थानीयहरुलाई उक्साएर पटक–पटक तल्लो जात भन्दै गाली गलौज गर्ने गरेपछि आफुसँग झगडा समेत परेको थियो । त्यसपछि स्थानीयसँग झैझगडा गरेको, समिति गठन गरेको भन्दै भिक्षु मालिन्दलाई समितिले पुस १४ गते माफी मगाई राजकिय बौद्ध विहार छाड्ने लिखित पत्रमा हस्ताक्षर गराएको छ । मिलिन्दले त्यहाँका भिक्षुहरुलाई समेटेर लुम्बिनी मायादेवी भिक्षु संघ नामक संस्था गठन गर्नुभएको थियो । सोही कारण पनि मिलिन्दलाई बुद्ध धर्मको भावना विपरित संगठन खोलेको समितिको भनाइ छ । चितवन भरतपुरका भिक्षु मिलिन्द ३० वर्षअघि दिल्लीमा अध्ययन गर्दै गर्दा बौद्ध धर्मको अनुयायी हुँदै भिक्षु बन्नभएको थियो ।
नेपालमा संघ संस्था खोल्न पाउने प्रत्येक नेपालीको अधिकार रहेपनि तल्लो जातको भिक्षु भएकै कारण त्यहाँबाट निकाल्न विभिन्न आरोप लगाईएका उनका भक्त उपासक भिक्षु शिलभद्रले बताउनुभयो । जवरजस्ती लेखाईएका भनिएकोे पत्रमा संघ नायक ‘अश्वघोष’को आज्ञानुसार अस्थायी रुपमा बसेको र हाल उहाँकै आज्ञाले उक्त बिहार छोडेको उल्लेख छ ।
भिक्षु मालिन्दले आफु तल्लो जात भएकै कारण समितिले कुटनिति चालेर हटाएको आरोप लगाएका छन् । अहिले मालिन्द मायादेवी मन्दिर अगाडि रहेको राजकीय बौद्ध विहार स्थित पिपलको रुखमुनी अनसनमा बसेका छन् ।
आफुलाई जातीय सूचक लगाएर गाली गलौज र आक्रमण गर्ने लखनसिंहलाई सहमती अनुसार कारवाही नभएको र बुद्धको दर्शन र भावना विपरित जातीय विभेद गरि बुद्ध धर्ममै असर पर्ने काम भएकाले यसलाई रोक्न माग गर्दै आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
समितिले अहिले पनि अखिल नेपाल भिक्षु महासंघले स्विकृती दिएमा भिक्षु मालिन्दलाई बस्न दिने बताएको छ । तर महासंघले पनि दलित भएकै कारण स्विकृति नदिदा चित्त दुखेको गुनासो गर्नुभयो ।
लुम्बिनी धर्मोदय समितिका सहसचिव सुवर्णमान शाक्यले कर्मचारी लखन सिंहले जातीय रुपमा अपमान गरेको साँचो भएको स्विकार गर्दै मिलिन्दलाई जातीयताकै कारण नहटाएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘जसले भिक्षु बनाएको हो, उहाँले नै त्यहाँ नबस्नु भनेर बोलाएको छ, तर भिक्षु मिलिन्दले त्यसलाई अस्विकार गर्दा समस्या आएको हो’ सहसचिव शाक्यले भन्नुभयो ।
६ महिनाको लागी मात्र पठाईएकोमा भिक्षु साढे २ बर्ष देखि जवरजस्ती बसिरहेको शाक्यको भनाई छ भिक्षुहरुलाई बिभिन्न बिहारमा खटाउने र तान्ने काम भिक्षु महासंघको भएको र त्यसमा बिहार प्रशासनको कुनै भुमिका नरहने लुम्बिनी धर्मोदय समितिले जनाएको छ । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङ्गले यो घटनाले लुम्बिनी र बुद्ध धर्ममा असर पारेको बताउँदै यो घटनालाई साम्य पार्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बुद्ध धर्ममा छुवाछुत भन्ने हुँदै नहुने बताउँदै भिक्षु मिलिन्लाई पनि कुनै विभेद नभएको दावी गर्नुभयो । यता दलित अधिकारकर्मी पदम बहादुर विकले बुद्ध धर्ममा विभेद भएको घटनाले आफुहरु स्तम्भ भएको बताउनुभयो ।
उनले जातीयताको आधारमा विभेद भयो भनेर घटना आउनु अत्यन्त दुःखद भएको भन्दै दोषीलाई कारवाही गरि बुद्धको जन्मथलोलाई विभेदको थलो नबनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
अर्का अधिकारकर्मी किस्मत विश्वकर्माले भिक्षु मिलिन्दले पहिलै पनि आफुमाथि छुवाछुत हुने गरेको आफुहरुसँग गुनासो गर्ने गरेको बताउँदै अति नै भएर घटना सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो । ‘अब यो घटना बढाउनुभन्दा धर्मोदय समिति र प्रशासनले समेत निकासन निकाल्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
By जागरण मिडिया सेन्टर in दलित समाचार on February 2, 2015 .
← दलित भएपछि निकालिए लुम्बिनीका पुजारी, मायादेवी मन्दिर अगाडी भिक्षु मिलिन्दको अनशन	आजका पत्रपत्रिकामा दलित समाचार सामाग्री । →